Jono an-dranomasina:Vokatra 110 000 taonina isan-taona no voatrandraka -
AccueilVaovao SamihafaJono an-dranomasina:Vokatra 110 000 taonina isan-taona no voatrandraka
Mbola kely ny vokatra avy amin’ny hazandrano voatrandraka eto Madagasikara manoloana ny 100 000 000 taonina tadiavin’izao tontolo izao isan-taona. Zara raha manodidina ny 110 000 taonina isan-taona eo no vokatra vokarintsika eo amin’izay sehatry ny hazandrano izay, ary ny 85% an’izany dia avy amin’ny fari-dranomasina avokoa. Mahatratra 50 000 hekitara ny toerana ahafahana manao ny fiompiana makamba eto Madagasikara mbola tsy voatrandraka ary maherin’ny 114 tapitrisa hekitara ny faritra azo hitrandrahana ireo hazandrano noho ireo ranomasina manodidina sy ireo faritra manan-karena rano eto amintsika. Tombony lehibe eo amin’ny lafiny ara-toekarena ny fahaizana mitrandraka ity sehatra ity, ity farany izay anisan’ny laharam-pahamehana tao anatin’ny fitadiavana famatsiam-bola entina hanatsarana ny fari-piainan’ny olom-pirenena amin’ny alalan’ny fampitomboana ny harikarena faobe. Mihoatra ny 40% ny harikarena faobe no avy amin’ny sehatry ny hazandrano izay raha ny tatitra avy amin’ny minisitera misahana ny toekarena tamin’ny taona 2000. Ho an’ny makamba manokana dia manodidina ny 17% ny famokarana avy aty amin’ny faritry ny ranomasim-be indianina eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Mbola ny 5% ao anatin’izay no anjaran’i Madagasikara.
Amin’ny alalan’ny fandaharan’asa famatsiana ny sehatry ny fiompiana sy ny fambolena na ny PNIAEP kosa anefa dia efa misy ny tetikasa ho fampiroboroboana ny sehatry ny jono izay ao anatin’ny dimy taona izay nanomboka tamin’ity taona 2016 ity. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa miisa 17 hampiasana vola mitentina 3.193 lavitrisa dolara amerikanina izay ho voizin’ny fitondrana ankehitriny, no entina hampiroboroboana ny sehatry ny jono, hanomezan-danja ny makamba, sy ny drakaka ary ny ahidrano. Amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ireo sehatra azo trandrahina eto Madagasikara no ahafahana miroso amin’ny fampandrosoana maharitra. Ity sehatra izay afaka ny hiteraka asa maro sy hanatsara ny fari-piainan’ny tantsaha izay maherin’ny 80% eto Madagasikara. Ho an’ny Makamba manokana dia misy ny tetikasa ho fametrahana fotodrafitrasa ahafahana mitrandraka sy manitatra ny seha-pihariana eo amin’ny sehatry ny jono izay. Misy ny fiaraha-miasa amin’ireo sehatra tsy miankina ao anatin’ny fivoizana ireo tetikasa. Tamberim-bidy goavana ho an’ny firenena ny fampiroboroboana ny sehatry ny jono izay. Entina hampihenana ny fifindra-monina sy ny tahan’ny tsy fananana asa ny fanitarana ireo sehatr’asa. Teboka lehibe hampihena ny fahantrana aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana ny fitrandrahana ny fiompiana sy ny fambolena. Misy ny vina ho amin’ny fanitarana ny vokatra ahafahana misahana tsena bebe kokoa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ho an’i Madagasikara.